Cayaaryahanka helay Codadka ugu badan Taageerayaal Real Madrid ay u doonayaan badelka Cristiano Ronaldo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cayaaryahanka helay Codadka ugu badan Taageerayaal Real Madrid ay u doonayaan badelka Cristiano Ronaldo
(13-7-2018) Cristiano Ronaldo siima ahaan doono laacib ka tirsan Real Madrid, waxaana qaar badan oo ka mid ah Taageerayaasha kooxdan ay codsadeen in Kylian Mbappe laga dhigo beddelkiisa.
Booska uu Faarujiyay laacibka dalka Portuguese-ka ayaa ah halka la doonayo in waqtigaan la buuxiyo, waxaana jira in Neymar uu ahaa laacibka ugu dhow ee Taageerayaasha Real ay ku fakarayeen in lagu buuxin karo.
Tottenham Hotspur laacibkeeda Harry Kane ayaa sidoo kale ka mid ah xiddigaha lala xiriirinayo Naadiga Horyaalka Yurub ah; Kylian Mbappe oo gaaray Final-ka Koobka Dunida ayey taageerayaal badan hadda doonayaan saxiixiisa.
Boqolkiiba 54 Taageerayaal ka badan oo kuwa Real Madrid ah ayaa u codeeyay laacibka kooxda Paris Saint-Germain in uu noqdo beddelka Laacibkaas, wargeyska MARCA oo codeynta sameeyay ayaana sheegaya inuu yahay laacibkaas kan ugu mudan.
Eden Hazard waa laacibka labaad ee ay doonayaan Taageerayaasha kooxdan, 15 boqolkiiba ayuuna ka helay Codeynta, Neymar ayaa helay 14 Boqolkiiba halka Kane uu isna helay Codeynta 10%.
Lixda Cod ee kale ee aan lagu soo Bandhigin halkan cidna uma aysan Codeynin.